Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Isniin Ah Ay Qoreen Wargeysyada Yurub - Gool24.Net
Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Isniin Ah Ay Qoreen Wargeysyada Yurub
August 17, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaysa wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda maanta oo Isniin ah:
Xiddiga Barcelona ee Lionel Messi ayaa u sheegay kooxdiisa inuu doonayo inuu si degdeg ah uga tago, waxaana 33 jirkani saaran yahay diiradda Manchester City oo doonaysa inay ka faa’iidayso niyad-jabkiisa Barcelona. (Esporte Interativo)
Barca waxay diyaar u tahay inay dhegaysato dalabyada laga soo gudbinayo raxan ciyaartoygeeda ka tirsan, sida Antoine Griezmann oo 29 jir ah iyo Ousmane Dembele oo ay isku waddan yihiin da’diisuna tahay 23 jir. Griezmann waxay Barca kasoo bixisay £107 milyan oo Gini oo ay Atletico Madrid kagala soo wareegtay sannadkii 2019, halka Dembele ay £135.5 milyan oo Gini kaga soo qaateen sannadkii 2017. (Sport)
Tababarihii hore ee Tottenham ee Mauricio Pochettino ayaa la sheegay inuu beddeli doono Pep Guardiola haddii uu macallinka reer Spain heshiis cusub u saxeexi waayo Manchester City. (Sun)
Arsenal iyo weeraryahanka reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang oo 31 jir ah ayaa isla meel-dhigay qodobbada heshiis cusub oo ay gaadhayaan, waxaana sidoo kale ay Arsenal u dhow dahay inay lasoo saxeexato difaaca reer Brazil ee Gabriel Magalhaes oo ah 22 jir u ciyaara Lyon. (Telegraph)
Juventus ayaa xiisaynaysa weeraryahanka Arsenal ee Alexandre Lacazette iyo laacibka afka hore uga ciyaara Wolves ee Raul Jimenez oo labadooduba min 29 jirro ah, waxaanay doonayaan in midkood ay lasoo saxeexdaan xagaagan. (Sky Sports)
Kubbad-sameeyaha Bayern Munich ee Thiago Alcantara wuxuu heshiis afar sannadood ah la gaadhay Liverpool, kaddib markii kooxdiisa Bayern Munich ay ogolaatay inuu samayn karo saxeexa, waxaana hadhay in labada kooxood ay dhinacooda ka dhamaystiraan heshiiska laacibkan oo £30 milyan oo Gini ku kacaya. (RMC Sport)
Juventus waxay diyaar u tahay inay wada-hadallo la furto kooxaha danaynaya weeraryahanka reer Argentine ee Paulo Dybala oo 26 jir ah, waxaana kooxaha xiisaynaya ka mid ah Manchester United iyo Tottenham. (Gazetta Dello Sport)
Difaaca bidix ee Chelsea ee Alex Sandro oo ah 29 jir u dhashay Brazil, ayay Chelsea oo bartilmaameed ka dhigatay ku heli kartaa £36.2 milyan oo Gini, kaddib markii uu Andrea Pirlo ogolaaday in la iibiyo si lacagtiisa uu xiddigo kale ugu doorto. (Corriere Dello Sport)
Chelsea waxay mar horeba u dhaqaaqday difaaca Manchester City ee John Stones oo 26 jir ah, waxaanay keeni doontaa Stamford Bridge xattaa haddii ay ku guuleystaan saxeexa difaaca 28 jirka ah ee Lewis Dunk oo u ciyaara Brighton. (Mirror)
Inter Milan ayaa xiisaynaysa difaaca Manchester United ee Chris Smalling oo 30 jir ah, waxayna diyaar la yihiin inay bixiyaan £20 milyan oo Gini. laacibkan ayaa kasoo laabtay amaah uu ugu maqnaa Roma. (Metro)
Leeds United waxay diiraddeedu saaran tahay difaaca reer Germany ee Robin Koch oo ah 24 jir u ciyaara Freiburg iyo difaaca dhexe ee Ben White oo ah 22 jir ka tirsan Brighton. (Telegraph)